ဂိမ်းယနေ့တွင် | အားကစားသတင်းများခေါင်းစီးသတင်းကို Global ဆောင်းပါးများ WebSite.WS | GVMG - ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Viral စျေးကွက် Group မှ
အားကစားသတင်းများခေါင်းစီးသတင်းကို Global ဆောင်းပါးများ WebSite.WS > ဂိမ်းယနေ့တွင်
ဧလိ Manning : 2004 မူကြမ်းနေ့စိတ်ကြိုက်
ဧလိ Manning ဇန်နဝါရီလရက်နေ့တွင်မွေးဖွားခဲ့သည် 3, 1981 New Orleans တွင်, Louisiana. သူက Indianapolis Colt quarterback Peyton Manning ၏အစ်ကိုသည်, ဟောင်း NFL ကစားသမား Archi Manning ၏သား. ဤကဲ့သို့သောဖြစ်မဖြစ်ကိုသွေးနှင့်အတူက Manning ဂိမ်းအတွက်ယနေ့အကောင်းဆုံး quarterbacks တစ်ခုဖြစ်သည်ကြောင့်အံ့ဩစရာမရှိဖြစ်ပါတယ်. အစောပိုင်းအသက်အရွယ်ကတည်းကသူဘောလုံး၏ဂိမ်းပတ်ပတ်လည်ခဲ့, နှင့်ဤသူသည်လယ်ပြင်ပေါ်တွင်ဂိမ်းကစားသောလမ်းဖြင့်ထင်ရှား၏. အောင်မြင်တဲ့အထက်တန်းကျောင်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြီးနောက် Manning သည်မိမိ gam ယူ ...
ကလင်တန် Portis : 2002 မူကြမ်းနေ့စိတ်ကြိုက်
မိုက်ကယ် Vick Overrated
Michael Vick of the Atlanta Falcons is overrated. ဟုတ်ကဲ့, the title says it all. He does haveagreat game now and again, but he's far from one of the best QB's in the game today. He was on Inside The NFL on HBO earlier this season crying about how he doesn't get the respect he deserves. He also said that he was just as good as Peyton Manning and Tom Brady and deserved to be in that group of the best of the best QB's. I don't think so. What's he done? He's been in the league ...
Humminbird SmartCast: Sonar အာရုံခံကိုသင်သူများသည်တွေ့ရခဲသောငါးရှာမည်ကိုကူညီပါရန်
ဂေါက်သီးရိုက်သင်ကြားရေး Tool ကို — သင်၏အ Swing လေယာဉ်ကိုဆုံးမ
ဂျာနယ်များစခန်းချ ‘ သင့်ရဲ့စခန်းအတွေ့အကြုံများထိနျးသိမျး
အဘယ်ကြောင့်, oh အဘယ်ကြောင့်, ထိုဂေါက်သီး Swing SO ခဲယဉ်းသည်?!
ဂေါက်သီးရိုက် Swing သိကောင်းစရာများမိမိတို့ကိုယ်အားဖြင့်အလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်
အွန်လိုင်း Poker စေရန်တစ်ဦးနိဒါန်း
အင်တာနက်ကို Poker မဟာဗျူဟာ
အားကစားပရိသတ်များအခွံမာသီးကို သွား. သောအခါ,
Bird ကိုစောင့်ကြည့် Started Get လုပ်နည်း